Lammaa Magarsaa fi iccitii sochii isaa; Lammaan maalif wayyaanee arrabsa? – Kichuu
HomeAfaan OromooLammaa Magarsaa fi iccitii sochii isaa; Lammaan maalif wayyaanee arrabsa?
Lammaa Magarsaa fi iccitii sochii isaa; Lammaan maalif wayyaanee arrabsa? Maalif uummata keessa deemuu baay’ise?
Lammaa Magarsaa gaafa dargiin burkutaa’ee sirni faashistii wayyaanee aangotti olbahu bara 1983 ALH gaafa OPDOn Tigrootan hundeeffamte irraa eegalee miseensa dhaaba tanaa ture. Yeroo garaa garaatti bulchiinsa OPDO keessatti hooggansa sadarkaa gadii irraa eegalee hanga peresdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa tahutti dhaaba tanaaf nama amantaa fi kutannoon hojjachaa tureedha. Waggoota afuriif basaasaa (ሰላይ) wayyaanee tahee Oromiyaa iddoo gara garaa keessa nama socho’aa tureedha.
Lammaan maalif yeroo ammaa wayyaanee arrabsa?
Wayyaanonni yeroo ammaa nu caalaa qaroomaniiru. Isaan kan barbaadan maqaa eeggachuu osoo hin taane umrii aangoo isaanii dheereffachuudha. Biyyattii hundarra faca’anii qabeenya walitti qabatanii teeknolojiin gaafa fagaatan naannoleen biroo dirqama isaanirratti akka hirkatanii jiraatan gochuudha. Kubbaaniyoota gurguddoo lammii isaanii keessaa horachuudha. Diinagdee fi teeknoolojiin fuulduratti tarkaanfachuudha.
Kanaaf jecha wayyaanen Lammaa Magarsaa wanta barbaade dubbatee uummata Oromoo bakka hundaa dammaqe kana sobee akka qabaneessu karoora hayyonni Tigree baafatteedha. Afaanin qofa osoo hin taane tarkaanfiilee tokko tokko akka inni aantummaa uummataa waan qabu fakkaatee mootummaa federaala fi abbootii qabeenyaa federaalaa irratti fudhatu mirga guutuu kennaniifii jiru.
Mirgoota wayyaanen Lammaa Magarsaaf kennite keessaa;
1) Akka barbaadetti wanta mootummaa tuquufi xiqqeessu, rakkoo mootummaan raawwachaa ture saaxilan akka ifatti haasawu.
2) Qabeenya Oromiyaa saamame keessaa hamma tokko kan galii guddaa isaan irraa hin hambisne akka deebisu.
3) Lafa qonnaan bultoota irraa fudhatamee abbootii qabeenyaf kenname muraasa irraafuudhee dargaggotaf akka kennu
3) Miidiyaan wayyaanee DHRTVO uummataan waan jibbameef uummanni akka miidiyaa kanatti amanuuf darbee darbee rakkoolee gama mootummaan jiran akka uummataaf gabaasu gochuu fi kkf dha.
Mootummaan wayyaanee gochaa Lammaa Magarsaa kana akka waan itti hin gammannee fi aantummaa uummata Oromoof hojjatee fakkeessun Lammaa qeequu fi himachuu akka dandahanis odeeffannoon kuni ni addeessa. Akka odeeffannoo kanaatti gara fuula duraatti hojiilee Lammaa Magarsaa hojjachaa jiru qeequdhaan mootummaan federaalaa akka inni uummata Oromoo biratti deeggarsa argatee dargaggoota qabsoo irraa laaffisee qabsoo qeerroo dhabamsiisuf shirri hojjatamaa jiru guddaa akka tahee fi Lammaan kanaan booda mirga guutuu wayyaanee irraa argatee akka socho’uudha. Yeroo ammaa Lammaa Magarsaa jechoota arrabsoo Baqqalaa Garbaa fi Dr. Mararaa Guddinaatuu itti fayyadamanii hin beeknetti fayyadamee mootummaa arrabsaa fi qeeqaa jira. Kuni ergaan isaa ifaadha. Baqqalaa fa’a hidhanii isa maalif akka itti cal’isan nu hundaaf ifuu baatus akeekni isaa ifa gala.
Dhuma irratti kaayyon qabsoo Oromoo doomsuu yoo milkaahef ilmaan Tigraay humna waraanaa fi hooggansa ishee cimsachuun akka uummanni deebi’ee sochii kamuu hin goone shira ciccimaa qopheessaa akka jirtu bira gahameera.
Uummanni keenya kana walhubachiifnee shira diinummaa qabsoo ilmaan Oromoo kumaatamni bilisummaaf jecha irratti wareegaman faaydaa kamiinuu osoo hin sobamne itti fufiinsan gaggeessudhaan akka galmaan geenyu dhalataa Oromoo lubbuun jiru hundaaf dhaamna.
Dhugummaa isaa adeemsa keessatti kan mirkaneeffannu taha.
Via Miidhaksaa Abbishuu
Condo Game Robbing from the poor, giving to the rich